kaMasipala eMoscow kushintsha njalo. Ukwakha iziteshi ezintsha kanye imigqa. It ikuvumela ukuba sihlanganise izindawo ezihlukahlukene dolobha nasezindaweni ezizungezile ku kunethiwekhi eyodwa ezokuthutha. Metro ikuvumela ukuba ngokushesha ukusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, ngaphandle emi amahora esiminyaminyeni sezimoto, okuyinto eMoscow - akukhona okungavamile ukuba likhithike. Omunye imigca iyona indandatho, okuyinto kuze 2016 kwaba kuphela umugqa kaMasipala ephambana nazo zonke ezinye imigqa. Kulo nyaka wavula CIT (eMoscow Ring sesitimela). It ligamanxa yesibili indandatho umgwaqo ovulekile, futhi enyakatho yeMoscow sihamba phezu kwawo. Lesi sihloko sizochaza lokho izici CIT, libukeka scheme omusha kamasipala "eMoscow nge CIT," cabanga ezinye amaphuzu abalulekile.
Metropolitan eMoscow ingenye izifunda eyinselele kakhulu emhlabeni. Siqukethe imigqa 14 futhi 203 iziteshi, kuhlanganise kokubili angaphansi komhlaba. Iningi imigqa ongaphansi komhlaba adlule edolobheni. Kukhona umugqa omfushane, ube ngezithako zawo iziteshi 2-3 kuphela futhi interconnecting amagatsha non-ezedlulayo. Futhi, zikhona 2 izindandatho, omunye engesiyo ngempela komhlaba bendabuko. On ke Kuzoxoxwa.
Entsha indandatho umugqa: libukeka
Moscow ring ujantshi limelela ujantshi ikakhulukazi evulekile phansi uhlobo. It uyagijima ezindaweni flat emigwaqweni futhi izigaba nzima nosidlulisayo kwebhuloho. In the new umugqa esiteshini annular 31, phakathi kwawo kukhona kokubili ehlukile futhi angalingani nabanye imigqa ngomshoshaphansi.
Ngaphambi CIT drive akuyona abavamile ongaphansi komhlaba izingoma, futhi aqeqeshe okuningi okufana izitimela. Lezi izitimela abizwa ngokuthi "Swallows". Bakuhlonyiselwe ingcono kakhulu izingoma ezilula, egijima nasezitimeleni ngomshoshaphansi. Ziyakwazi emikhulu ngobukhulu, ngaphezulu ivulekile, zinikeza zihlalo okukhulu. Baphinde babe zangasese, izikrini, isikhala ukuthuthwa ingane namakalishi kanye amabhayisikili. Izimoto ngisho athembisa ukuhlomisa Izitolo sokuzivuselela zobuchwepheshe, kodwa inethiwekhi ye-Wi-Fi ivuliwe embuzweni. Yenza wakhe ufuna, kodwa nini futhi kanjani kahle, ayikaziwa.
Entsha indandatho umugqa: okusebenza ngayo
Isikimu eMoscow Metro nge CIT ebonisa ukuthi iziteshi eziningi indandatho imigqa kuyodingeka ukuhwebelana ngesikhathi metro station. Iziteshi okunjalo kuyoba 17. Lapho zitshala nge 11 iziteshi kwathatha nemipheme komhlaba azovalwa: metrostroiteli onjiniyela ukubiza lesi simiso "izinyawo ezomile". C iziteshi 10 CIT ungadlulisa ukuba izitimela. Futhi kakhulu phansi zokuthutha ihlelelwe ukuba uxhumanise stop ngasinye. Lokhu isivele kwenziwe, kodwa akukenziwa ngokugcwele. Ukuze ukusuka kwelinye esiteshini kwesinye, udinga imizuzu 2 kuya 5.
-Drive izitimela nge 5-6 imizuzu ngezikhathi ngezikhathi ezimatasa (ekuseni nakusihlwa) imizuzu 10-15 ngezinye izikhathi. Ukusebenza isikhathi akuhlukile lonke kaMasipala - kusukela ngo-6 ekuseni kuze kube sekuseni.
Yokugibela ngenxa CIT kuyafana nasezitimeleni - ruble angu-50. Futhi, travel efanayo ( "Three", "90 amaminithi", futhi yathamba. D.). Ingabe ukuthi aphuma metro station mazimise CIT kuyodingeka usebenzise ikhadi futhi noma ukukhokha yokugibela ne ithikithi elilodwa.
manje kanjani ubukeka isikimu kaMasipala
Kubuyekeziwe eMoscow ibalazwe kaMasipala ne CIT sabukeka ngobubanzi ngokuphelele. Metropolitan lamboza indawo enkulu kakhulu, futhi ukusuka kwelinye esiteshini kwesinye (okuyinto edingekayo ngaphambilini, isibonelo, ukufakelwa 3) manje ukudlulisela 1 noma cha.
Emihle nemibi CIT
CIT, njenganoma iyiphi emisha emzini omkhulu kunezinzuzo zako kanye nebubi. Okokuqala, ake sicabangele izinzuzo:
Ukwehlisa isikhathi esidingekayo ukuhamba ukusuka endaweni A kuya endaweni B phezu eMoscow Metro. Ukushayela nge iziteshi ezintsha, okwethulwa ngenhla, it lets kungase kungabi ngokushesha ukuze uzule, kodwa ukwenza uhambo ngaphandle Ukufakelwa ezingadingekile manje abe ngokoqobo.
Ukunciphisa ukugeleza umgibeli wokuqala indandatho umugqa futhi ngenxa yalokho, athula yayo.
Entsha ezokuthutha scheme of the Moscow Metro nge CIT lihlanza izindawo ezikude kanye azungeze eMoscow.
Ukwakhiwa kwengqalasizinda nokwakhiwa kwaleli izindawo ezingenalutho eduze entsha iziteshi CIT.
Abaningi ayikuthandi olusha eMoscow Metro. Ukushayela iziteshi ezintsha bexakwe kokubili izivakashi kanye bendawo. Kodwa sikholwa ungathola esetshenziswa kule.
Izikhombisi CIT ikhokhelwa ngokwehlukile Subway ejwayelekile. E. It kuvela ukuthi kuyazuzisa ukushayela endleleni entsha kuphela kulabo abaye zixhaswe travel noma oqonda ngqo.
Ukungabi kwesikhathi kungenziwa ngokuthi ukuthi ongakabi yonke indawo kukhona amasha eMoscow ibalazwe kaMasipala ne CIT, ngakho kufanele bathembele noma ku circuit ubudala, noma kwizinhlelo zokusebenza zeselula amakhadi ezinyathelisiwe. Kodwa lokhu kuzoshintsha kwezinyanga ezimbalwa.
amathemba esikhathi esizayo
Esikhathini esizayo sihlelwe ukuqedela zonke izinguquko iziteshi eduze ongaphansi komhlaba, ukubonisa okukhiphayo nge CIT ukuba ezokuthutha zomphakathi. Nakuba eMoscow ibalazwe kaMasipala ne CIT akwaziwa kahle kakhulu hhayi kuphela abaseRussia, kodwa ngisho Muscovites. Ngakho-ke, vele kukhona indawo signboards naleli cebo nasezitimeleni nasemigwaqweni. Ukugeleza abantu CIT akukakabi zizinkulu, kodwa kulindeleke ukuba kancane kancane ukwandisa inani abagibeli kanye nokwanda elihambisana ngenzuzo.
Libuye eduze iziteshi CIT sihlelelwe ukwakha efulethini izakhiwo ezintsha, isb. A. Ngaphambili indawo ezingafinyeleleki saphela. Ngakho, ngokwesibonelo, seliqalile okuhlongozwayo ahlelele intuthuko zezindawo okwakungezeRoma ifektri Zil. Ngokuvamile, kulindeleke ukuthi CIT uzophefumula impilo entsha nasezindaweni zakubo eziqhelile kanye nengqalasizinda yezokuthutha yenhloko-dolobha.
Nethezeka nengane eSpain - yini kangcono?
Kuyini magic? Umsolwa omdala sciences!
I kwezomnotho ukusetshenziswa Yelena River. emifuleni imikhumbi Russia: incazelo emfushane, isithombe
Omunye emahhotela aphambili e Tunisia - Solarus Golden Beach